Nwepu igwe onyonyo iji mee ka nchekwa ndị ọrụ site na ụlọ ọrụ - OMG Solutions
Igwefoto Leverage iji hụ na nchekwa nke Ndị Ọrụ site na rieslọ ọrụ
Ndị kamera dị ebe niile. Onye ọ bụla n’ime anyị nwere ike ijide ndụ kwa ụbọchị site na ekwentị. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-akpa agwa kacha mma mgbe ha ma na a na-ele ha. Ọbụnadị aro onye mmadụ na-ele na-emetụtakarị ndị mmadụ. Eleghị anya, anyị ga-eme omume dị iche iche naanị mgbe anyị hụrụ ihe ịrịba ama "CCTV dere 24 / 7" n'agbanyeghị agbanyeghị igwefoto anaghị edekọ. A na-eji kamera ahụ arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mmanye iwu na ụlọ ọgwụ. Agbanyeghị, enwere ike iji ya na mmepe nke ọrụ ugbo, na-egwupụta ihe ala, na-ewu ụlọ, na njem. Ngwuputa ahihia na oru ugbo nke juputara n'ihe egwu nwere ike kpuchie ya site na iji igwefoto ahu na WIFI na sistemu GPS.
Igwefoto eji ekpuchi aru nke igwe na-eyi egwu nwere ike chekwaa mkparịta ụka dị n'etiti onye zụrụ ahịa na onye na-ere ahịa n'oge azụmahịa ma emesịa enwere ike iji ihe ae dere na vidiyo a edekọtara na ihe akaebe. Ndi oru ugbo, ndi ahia, ndi anoghi ego, ndi ulo oru mbo, ndi nzoputa na ngalaba oku na kwa ndi isi ochichi nwere ike iji igwefoto mee ihe maka ileba ndi oru ha anya.
Ndị a bụ ụfọdụ ubi ebe igwefoto ahụ nwere ike inyere aka.
1. Ọrụ ugbo
2. Ngwuputa nri
4. Nmeputa ya
5. Ụgbọ njem
7. Eletriki, Gas na ọrụ ịdị ọcha
9. Azụmaahịa azụmaahịa
10. Ego, ego mkpuchi, na ezigbo ụlọ
Industrylọ ọrụ ọrụ ugbo ga-abụrịrị ụka dị mkpa karịa ka ọ dị ugbu a na iri afọ ole na ole sochirinụ. Willwa kwesiri iweputa nri nke 70% karịa na nke ọ mere na 2050 iji nye ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke ,wa nri, dị ka Foodlọ Ọrụ UN na Ọrụ Ugbo si kwuo. Iji mezuo ihe a chọrọ, ndị ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ ugbo na-atụgharị na ofntanetị nke Ihe maka nyocha na ikike mmepụta dị ukwuu.
Onye ọrụ ugbo ọ bụla ga-aghọta ihe isi ike idebe ala ha. Dịka onye nwe ala, ọ bụghị ihe ọhụrụ ị nwere puku acres nke ala. O siri ezigbo ike igbachi ma mebie ngalaba niile ma mee ka ndị na - ebugharị ya pụọ. Ọtụtụ mgbe, ndị na-eme mkpọtụ enweghị ebumnuche obi ọjọọ ma ọlị. Ọ dị mfe ịsụ ngọngọ na ala ubi na-amaghị. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ, ndị ohi ma ọ bụ ọbụna ndị ngagharị iwe ga-ahụ ụzọ ha. Nke a bụ ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ iji nyere aka wepu nke a.
• Signs ga - ebinye aka n ’ụzọ dị mfe iji gbochie ndị ngagharị, ndị ohi, na ndị ngagharị iwe nwere akara gburu gburu ala gị.
• Mee ka ndị ọrụ gị mara iji jide n'aka na ọ bụ akụkụ nke ọrụ ha ịkpesa arụmọrụ ọ bụla ma ọ bụ njehie ọ bụla.
• Ihe mgbochi anụ ahụ Otu ụzọ dị mfe iji dozie nke a bụ iji mejuputa ihe mgbochi anụ ahụ. Nke a nwere ike ịbụ fences ma ọ bụ waya nwere nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta na-egbochi ya.
• Mkpu na ihe nrịba anya na igwefoto CCTV na igwefoto eyi ahụ
• Jiri usoro GPS tụnye ahụ gị kpoo ụgbọ ala gị iji chọta ebe dị mfe
Ngwa ọrụ ugbo, mkpụrụ osisi, ugbo mmiri, na ubi buru ibu ma dịkwa ọnụ, igwe abụghịkwa onye ọ bụla chọrọ oge ụfọdụ ị ga-enwe ike ịzụta ma chekwaa ya. Azụmaahịa mgbazinye akụrụngwa na-eme ka ọ dịrị mfe ịnweta ngwa a dịka achọrọ, mana olee otu anyị ga-esi chebe azụmaahịa na ngwaahịa anyị?
Sistemụ onyunyo sistemu na-ewu ewu ma na-ewu ewu, n'agbanyeghị na ọ nwere ike isiri onye ohi ike izu ohi traktọ na sweta, azụmaahịa niile na-ere ahịa kwesịrị ịmara maka mbibi ndị ohi. Igwefoto onyunyo nwere ike nyochaa ubi, ubi mkpụrụ osisi na, ubi gburugburu elekere, ọbụlagodi mgbe ị na-anọghị n'ọfịs mana ịchọrọ ileba anya na igwefoto ndị ọrụ gị na-edekọ vidiyo ọ bụla na kwa vidiyo nke CCTV enweghị ike idekọ . Ọzọkwa, a onyunyo usoro nwere ike iji nyochaa onye ahịa mmekọrịta, soro ego njikwa na ego ndekọ, ma hụ na gị niile mkpara na ndị ahịa na-eso nchekwa ụkpụrụ gburugburu akụrụngwa.
Ileba anya na oru ugbo gi bu uzo di nma iji belata nfu ma bulie uru. Ingwụnye igwefoto na-echekwa ugbo na-enyere gị aka ilekwasị anya na ihe na-eme mgbe ị na-enweghị ike ịnọ ebe ahụ.
Ndị nne na nna kachasị atụ ụjọ bụ ka nwa ha dị afọ iri na ụma banye n'ihe mberede ụgbọ ala. O bu ihe nwute, ndi nne na nna kwesiri ekwenye. Isi ihe na-akpata ọnwụ n'etiti ndị nọ n'afọ iri na ụma bụ ọnwụ nke ụgbọala. Inwe ugbo ala nwa gi nwere ihe nlere anya nke ozu kamera GPS ka ilegide anya n’ile anya n’uche ha ma obu gbochie ha ibanye n’abali nwere ike belata ohere ha nwere itinye onwe ha n’ihe mberede. Site na ọsọ njem gaa ebe dị mma, ndị nne na nna na-enweta ihe ọmụma dị mkpa iji nyere aka kpuchido ụmụ ha. Igwefoto Enyi Ekpuchitara ekpuchi nke nwere Encryption [Na ihuenyo LCD] (BWC060) bu ezigbo ndi nne na nna na ndi ulo oru ima ha ndi umuaka na umu aka.
Nọmba ndị njem n'ụgbọ njem ụgbọ ala, bọs na ọrụ ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ na-etolite kwa afọ yana oku maka nkwupụta nghọta ka ukwuu na ngosipụta ọha na eze. Ojiji nke teknụzụ vidiyo na-eyi anụ ahụ na-abawanye na netwọ ụgbọ njem buru ibu na nzaghachi oku ndị a.
A na-etinye teknụzụ vidiyo na-eme ahụ arụ ọrụ nke ọma na ụzọ atọ akọwapụtara;
1. A na-eji njikwa ndị ahịa na-eji vidiyo vidiyo kama ụdị mkpesa n'ịntanetị iji mepụta arụmọrụ mkpesa ozugbo n'ofe netwọsị njem.
2. Ndị na-ebu ozi na ndị na-ebubata ya na-eji teknụzụ vidiyo na-eyi ahụ maka ebumnuche nke mmesi ike dị ka ihe akaebe nke nnyefe ya na igwefoto jidere ya.
3. Dị ka ihe mgbochi dị mma megide wayo tiketi na akparamagwa ọha na eze.
Tragbọ oloko Virgin aghọwo onye ọrụ ụgbọ oloko UK izizi na-enye kamera ndị eyiri ekpuchi iji kpuchie ndị mmadụ niile, na-ebute mwakpo ndị ọrụ na-ada ihe karịrị ọkara. Nsonaazụ sitere na nyocha gosipụtara na ihe karịrị 80% nke ndị ọrụ chere na ọ dị mma na-arụ ọrụ mgbe ha na-eyiri ozu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% ga-akwado ha na ndị ọrụ ibe.
Enwere ike iji kamera ahụ wee chebe ndị na-ere ahịa, ihe ndị ọzọ na ọhaneze. Nchoputa gosiputara na igwefoto ndi aru ndi nwere aru oru na ntughari aka ha belata ime ihe ike, iyi egwu na mmechu aka n’ebe oru. Kamara nwekwara ike inwe ezigbo mmetụta n’ịgbanwe omume nke ndị ọrụ na ndị ahịa mgbe ha chọpụtara na a na-ese vidio ha.
Ebumnuche nke igwefoto ahụ na-eyi bụ iji belata ime ihe ike megide onye na - ejide igwefoto, nye ihe akaebe nke mmekorita / omume ndị e mere iji gosipụta ebubo ọ bụla ma nye echiche na-enweghị isi na nke ziri ezi banyere ihe merenụ, mmekọrịta ma ọ bụ ọrụ. CCTV bụ nnukwu akụrụngwa ọ na - enweghị ụda oge niile, mana kamera ahụ na - enye nkwado na akaebe.
Ebe a na-ere azụmaahịa nwere ike iji ihu igwe mmadụ mata ihu iji belata aghụghọ na ohi. Ndị ụlọ ọrụ na-ebugote foto nke ndị ha chọrọ ilele, dị ka ndị aka ntụtụ, ndị ọrụ iwe ma ọ bụ ndị ọzọ nwere mmasị, n'ime sistemụ. Usoro ahụ na-echekwa ndị ahụ nọ n'ụlọ ahịa ahụ. Izu ahịa na-egosikwa na ebe a na-akwụ ụgwọ maka na ndị na-ere ego anaghị enyocha ngwaahịa maka ndị enyi na ezinụlọ. Sistemu eji arụ ọrụ, dị ka Kwụsị Liftkwụ na iji igwefoto nchekwa na ntinye aka na ọgụgụ isi mmadụ iji zipu ọkwa dịka nke a na-eme.
Onwere ihe eji ama ahia, ima atu, nke na adighi anabata ihe ndi ozo karie mkpu okacha amara banyere elele nke onye ahia ya na ele ya. Ọ dị obere dị ka arụmụka maka na imegide ndị na-eche nche na-ere ahịa n'ọnụ ụzọ ọ bụ ihe ncheta anụ ahụ maka ndị ga-abụ ndị ohi na anabataghị ha.
Na akụkọ kachasị ọhụrụ, "Biometric Marketing 2019," achọpụta na n'agbanyeghị nchegbu, ndị na-ere ahịa na-enyocha teknụzụ biometric, gụnyere nsuso omume na nyocha ihu na olu, maka mgbasa ozi na ịkwalite mgbasa ozi. Usoro ndị a nwere ike ịchọpụta ma soro ndị na-azụ ahịa na ụlọ ahịa brik na-ngwa agha ma mụta ihe ha chọrọ, dị ka otu ndị na-ere ahịa n'ịntanetị si eji kuki. Enwere ike iji ihe ọmụma ahụ soro ha rụọ ọrụ site na ekwentị ha, akara ngosi ụlọ ahịa ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ.
Ọnụ ọgụgụ mpụ na mpụ na mwakpo ndị na-eyi ọha egwu n'ụwa niile na-eweta nnukwu elele maka mmeziwanye na atụmatụ onyunyo nke mpaghara dị iche iche. Igwefoto ahụ na-enye echiche doro anya na ezigbo ihe gbasara ọrụ ndị a na-eme. Dị ka ọ bụla azụmaahịa na iji ihe eji eme ihe, izu ohi bụ ihe a na-ahụkarị nke na-efu azụmahịa ọtụtụ puku, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nde, dollar kwa afọ. Ndị ọrụ na-ahụ maka ọtụtụ ngwongwo zuru ohi, mana maka ndị na-azụ ahịa, enwerekwa nchegbu nke ndị ọzọ na-ezu ohi ngwaahịa n’oge ebufe. Gbaa mbọ hụ na ịnwere usoro nchekwa siri ike n'ọnọdụ. Ndị na-eme ọrụ ga-eyi kamera ahụ iji mee ihe akaebe na ngwongwo zuo ohi na kamera ahụ nwere ihe GPS GPS n'ime ụgbọ iji chọta ebe ụgbọala na-ezuru.
N'afọ ndị gafeworonụ, ejirila teknụzụ vidiyo iji nyochaa ebe ndị ọrụ si emetụta ụdị mmetọ dị iche iche. Helmet-Cam nwere GPS bụ teknụzụ dị mfe ma dị ọnụ ala ịtọlite ​​ma jiri ya. Ọ mebere igwefoto vidiyo dị nfe, usoro maka ngwa ụlọ n’ụzọ ga-ekwe ka ndị na-egwu ọla rụọ ọrụ.
N'ụzọ doro anya, usoro ọ bụla na-enyere ndị ọrụ nchekwa aka itinye uche na ọrụ ndị ọzọ na-amị mkpụrụ na-abawanye arụmọrụ ma na-eme ka nchekwa ka mma. Mana nnweta usoro nchekwa vidiyo ahaziri nke ejiri ya na njikwa na njikwa ndị ọzọ nwere ike ịnye ọtụtụ arụmọrụ Ngwuputa nwere nnukwu ike nke nwere ike ibute nnukwu uru na mpaghara ndị ọzọ, dịka nchekwa na arụmọrụ nhazi dịka ọmụmaatụ. Ozugbo ndị njikwa ghọtara ikike dị na mkpịsị aka ha, ha na-ahụ ohere ọhụụ maka itinye ya n'ọrụ na enwere ike nweta uru dị ukwuu site na itinye ego.
Igwefoto njirimara mmadụ na-abanye na ụzọ ọpụpụ ga-enyocha onye na-abata na onye na-apụ. Imirikiti ndị na-egwu ogbunigwe na-enwe nchekwa na ebe ha na-enyocha, ya mere enwere oge zuru ezu iji wepụta ihu nke ọma. Ndị omebe iwu OMG ewepụtala usoro amara ya nke gụnyere ọrụ ntụnyere mmadụ iji mata ndị mmadụ ma gbochie ndị a na-enyo enyo ma ọ bụ ndị a machibidoro aha ndị a ịbanye n'ụlọ ebe a na-egwupụta akụ.
anyị anaghị ekwu ebe a maka ngwaahịa ndị a na-edebe akwa. Dịka onye zụrụ ahịa, ịkwesịrị ịchọpụta onye nrụpụta kwesịrị ekwesị nke nwere ngwaahịa na ahụmịhe dị mkpa, ọ dịkwa gị mkpa ijide n'aka na usoro usoro a họọrọ etolite ma arụnyere nke ọma. Dị ka ngwaahịa OMG nwere igwe na-eyi uwe na-enyere ndị ọrụ aka na Ngwuputa iji lee vidiyo nke ọnọdụ na okpu agha na cam na GPS na-enyere aka ịchọta ndị ọrụ efu n'okpuru ugwu ahụ na GPS ga-esokwa ebe ndị ọrụ nọ.
Igwefoto ahụ na-eyi (BWC), nke a makwaara dị ka kamera ahụ na vidiyo na-eyi, ma ọ bụ igwefoto na-eyi egwu, igwe egwu, ma ọ bụ usoro foto. Ndị ọrụ na ndị na-ahụ maka ọrụ na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ na-eche ọtụtụ ihe egwu na nsogbu ihu. Site na ndaba na ọdịda na nkwụsị azụmahịa metụtara ihu igwe na ọkụ na akụrụngwa zuru ezu, saịtị ndị iwu ihe owuwu ga-eche ọtụtụ ihe egwu kwa ụbọchị. Igwefoto ahụ na-egosi ihe mere n'ezie ma chebe ihe zuru ohi.
Ọkụ gbara ọkụ n'ebe ahụ abụghị ihe ọhụrụ. Otu ọkụ sitere na sander, welder, sịga, waya eletriki, ọkụ ọkụ nwa oge na ihe ndị yiri nke ahụ ga-enwu osisi, ihe mgbaze, nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ mmanụ ọkụ niile achọtara na saịtị ndị a na-ewu ọkụ. Igwefoto ahụ na-eyi na-arụ ọrụ na-eke mkpu na ihe egwu ma GPS na-enye ndị ọrụ nche ebe ọkụ na-enwu.
Ebe ọrụ a na-achịkwaghị achịkwa nwere ike ibute mmebi a na-amaghị ama site na mmiri na-agbaze ma ọ bụ ọkpọkọ jụrụ oyi, ọrụ na-ere anwụrụ ọkụ, na izu ohi / imebisị akụrụngwa na ihe. Igwefoto ahụ OMG ma ọ bụ okpu igwefoto nwere igwefoto bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị ọrụ ga-eyi n'oge mgbanwe ha iji nweta nchebe, oge ụfọdụ ndị ọrụ anaghị enwe mmasị na ibe ha ma ọ bụ na ha achọghị ịrụkọ ọrụ na ịmepụta ime ihe ike n'ebe ọrụ, ma ọ bụrụ na ha maara na ha na-filmed omume ha mgbanwe na a abụọ.
Nlụpụta bụ nhazi nke ngwaọrụ ma ọ bụ akụkụ ya n’ime ngwongwo ndị a rụchara arụ ọrụ site na iji ngwaọrụ, ọrụ mmadụ, igwe, na nhazi kemịkalụ. Ngwakọta buru ibu na-enye ohere maka imepụta ngwongwo nke ngwongwo site na iji ọtụtụ ndị ọrụ na teknụzụ dị elu. Techniqueszọ arụmọrụ dị mma na-eme ka ndị na-emepụta ihe na-eme ihe bara uru nke usoro, na-emepụta usoro ndị ọzọ na ọnụ ala dị ala.
Anyị maara na dịka iwu nchịkwa akụ na ụba si dị, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ anaghị arụ ọrụ. Mgbe ọtụtụ puku ndị ọrụ n'otu ebe ahụ ohere nke 100% ụfọdụ ndị ọrụ anaghị arụ ọrụ nke ọma, yabụ itinye igwefoto ahụ n'ahụ ndị ọrụ ga-enye data na ndị ọrụ anaghị arụ ọrụ nke ọma mana na-anata ụgwọ ọrụ kwa ọnwa. Nke abuo, igwefoto ahu na-enye ihe akaebe banyere ndi oru ndi dara iwu nke ulo oru. Nke ato, nchekwa bu isi ihe nzukọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ igwefoto igwe mmadụ na-enye ihe akaebe nke ngwaahịa. Igwefoto CCTV bụ ngwaọrụ onyunyo ochie mana ha anaghị ege ntị, mana na kamera ahụ, ndị ọrụ ahịa maara nghọta nke ndị na-azụ ahịa ihe ha chere maka ngwaahịa ha.
Igwefoto nchekwa bụ akụkụ nke ndụ kwa ụbọchị. Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ nchekwa ọ bụla. O kwesịrị ịbụ akụkụ nke atụmatụ enyemaka ọdachi. Ọtụtụ nzukọ na-eleghara uru igwefoto nchekwa nwere ike inwe na ihu abụọ. Nkwukọrịta n'ime òtù dị iche iche nwere ụzọ niile, ma nke na-adịghị kwa mgbe, nke na-agafe ozi, gbadata, na gafere netwọk nke ndị njikwa na ndị ọrụ. Enwere ike iji ụdị nkwukọrịta ndị a iji kesaa ozi gọọmentị n'etiti ndị ọrụ na njikwa, iji gbanwee mgbụkọ na asịrị, ma ọ bụ ihe ọ bụla n'etiti. Yabụ, ọ bụrụ na ndị ọrụ na-eyi igwefoto ahụ mgbe ahụ ozi ndị nwere ike ọ gaghị ekwu maka ya wee ghara ịpụta dị ka asịrị.
N'oge akụkọ ihe mere eme nke America, nke gbatịpụrụ ntakịrị karịa afọ 150, njikwa ndị America na-arụ ọrụ dịka ụlọ ọrụ nkwukọrịta "n'elu-ala". Ihe ọ bụla ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ kwuru bụ iwu. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere kọmitii njikwa ndị isi, a ga-atụle azịza maka ịme ihe niile site na ire ngwaahịa ahụ na ndị ọrụ na-emechi emechi. Ozugbo ndị njikwa mere mkpebi ndị ahụ, a gwara ndị njikwa dị ala ka ha tinye mkpebi ndị ahụ n'ọrụ. Ndị ọrụ enweghị obere ntinye. Ha mere ihe a gwara ha ma ọ bụ chọta ọrụ ebe ọzọ.
Eletriki, Gas na ọrụ ịdị ọcha
Ntọala ụlọ ọrụ ọkụ eletrik dị oke egwu n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọbụghị obere nkwanye anya nwere ike ịme ndụ mmadụ. Itughari uche nke igwefoto ndi eji ihe eji ese ihe bu ihe nlere anya nke ndi ulo oku. Abamuru nke iji igwefoto ahụ nwere n'ahụ na Kọmịshọn Kọwaa ndị nnọchi anya ị ga-agbaso iwu nchekwa n'oge ọrụ ha na mgbakwasị ụkwụ na-enweghị isi na-enweghị isi nke ndị ọrụ na-akpatara ha ezigbo nsogbu. Iji chọpụta ihe omume mere, ọ dị mkpa ido onwe gị n'okpuru ụkpụrụ na ụkpụrụ ndụ niile. Debe ndị trespassers na ndị a na-achọghị ịbanye na ngalaba ụlọ ọrụ eletrik ọ bụghị naanị ilele ihe mmerụ ahụ, na mgbakwunye, chebe ha n'ụlọ ọrụ ọkụ eletrik.
Imirikiti usoro ihe okike na-eme ka ikuku na mmanụ na-akpọsa. Lọ ọrụ na mmanụ gas na United States nke America enyela kamera ndị ahụ mebere ndị nchekwa na ndị ọrụ ubi. Ihe kpatara n'ile anya igwefoto bu ka agbasawanye nchekwa, na-elezi anya na ndị ọrụ ugbo. Site n'iji igwefoto eyi uwe ahu na-eme site na nche na ndi oru ogbe ha kwesiri ịchụ ebumnuche.
Site na iji igwefoto ndị eyiri ahụ n'ahụ na enyemaka ịdị ọcha, enwere ike ịtụle ma tụlee ntụpọ nsị na-enweghị isi na enyemaka enyemaka onwe ha mgbe ị na-ese foto na-aga n'ihu. Ga-amata nsogbu dị iche iche na ọchịchọ ha ozugbo. Dịka ọmụmaatụ, ASAlọ ọrụ CASA Sanitary Wares, Canada nyere ndị ọkachamara ya na ndị ọrụ ndị ọzọ igwefoto a na-ahụ maka oge ọrụ ha. Ha jiri Igwefoto a na-eyi n'ahụ soro:
• Nyochaa ndị ọrụ ma ha na-edebe ụkpụrụ nke nzukọ ma ọ bụ na ha agaghị elele ịchịkwa ihe mkpofu anya
• Lezie anya maka ihe na-emebi emebi
• Kwere ikike inyocha nyocha maka ịnọghị na saịtị
• Ihe nyocha ihuenyo maka ihe ọghọm na ọghọm dị iche iche
• Ọ na-egbochi ndị mebiri iwu na ndị mmadụ anaghị anabata ya site na mpaghara mmanụ mmanụ
• Na-enyocha ndị ọrụ 'ma ha na-agbaso ụkpụrụ nke nzukọ ma ọ bụ na ha anaghị
• Na-enweta ihe eserese ikuku gas
• Na-enyocha njikwa ihe mkpofu
• Zere iweghara na ibibi ihe
• Na-enye ikike inyochagharị maka nlele na-apụ apụ
Ego, ego mkpuchi, na ezigbo ụlọ
A na-ele njikọ ndị metụtara ego dị ka akụ anya dịka ụlọ ọrụ kachasị emetụta n'ụwa. Anyị na-enye ego anyị, ihe ịchọ mma anyị, na ebe ndebe ihe ochie anyị site na-adabere na ha. N'ụzọ dị otu a, usoro nlere ikiri vidiyo na-ahọrọ bụ ihe dị mkpa maka ndị otu ego. Site na ihe ndị na-eme ugbu a na ihe ọhụrụ dị elu na nghọta IP, ọtụtụ ụlọ akụ na-eche na ha ga-enyere aka inweta ikike nke ihe nchekwa ha site na itinye ego n'ime ihe ọhụrụ a. Igwefoto ndị eyi ya na ihe ngosi kamera CCTV ya na nyocha nke ihu, dịka ọmụmaatụ, nkwupụta ihu na-emezigharị n'okwu nke nnyocha ego na ụlọ akụ site na ozi mgbanwe na ịnwe onyonyo nke ndị na-emebi iwu. Ihe omuma a bara uru iji ghuta ndi mere ihe ma nye aka uringbanye na aka ndi ahia. Igwefoto ndị na-eyi ahụ nwere ike imezi ntụkwasị obi ndị ahịa na ụlọ akụ. Ka inweta akụ na-akwụ ụgwọ maka ya, otú ahụ ka ọ ga-esiri ndị ahịa ike. Igwe onyonye onyonyo na-arụ ọrụ nke ọma site na igwefoto eyi na kamera CCTV gosipụtara enyemaka dị ukwuu. Igwefoto ndị ahụ na-eyi n'ahụ mmadụ aghọọla otu nke ọfịs ọ bụla. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, ụlọ ọrụ ọ bụla na-anwa ịmegharị ya na nlele nke ndị ọrụ ya. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ mkpuchi na-anwa iji olu ndekọ vidiyo ejidere na oge ihe omume iji gosipụta ma ọ bụ enweghị mmasị na ọrụ, ha ga-agbadokwa ike gabigara ókè dịka ịgbalị iji vidiyo nke mmadụ n'ụlọ ha ma ọ bụ n'ime oghere mepere emepe. iji gosipụta na onye ahụ buru amụma ọnya ha. N'ụzọ dị otu a, iji igwefoto ahụ mmadụ wepụta nnukwu ego n'aka ndị otu ebe ọ bụ na kamera ahụ na-enye ihe akaebe nke ma onye ọrụ a ruru eru inye ego nchebe ma ọ bụ na ọ gaghị enye. Nke a bụ ihe ụlọ ọrụ ịnshọransị na-agbadata n'iji igwefoto ahụ.
Uru nke igwefoto ndi ahu yi na Banks na ndi ozo gbasara ego:
• Ndị ụlọ akụ na-elekwasị anya na ndị na-emebi iwu na-achọ nnukwu ụgwọ. Igwe onodu igwefoto, ihe ndi ozo doro anya, nwere ike ime ka ị ghara inweta ohi.
• N'ihi nke izu ohi na nke ana-apụnara mmadụ ihe nkiri sịnịma ọhụụ eyi eyi, enwere ike iji ya mata ndị a na-enyo enyo.
Ndị ọkachamara ụlọ na-eji akọ na-echekwa nchekwa mgbe niile ma na-elezi anya n'ọhịa ka nwere ike bụrụ ndị omempụ maka ndị omempụ.
You ga-eyi kamera ahụ? Ndị na-eme ihe dịgasị iche iche merela ajụjụ ahụ. N'ileghachi anya na Hinkel kwuru na ọ ga-abụrịrị onye na-awakpo ya ma ọ bụrụ na ọ na-eyi igwefoto ahu mana ọ bụchaghị. O meghị ihere igosipụta onye ọ bụ ma ọ bụ inye ya akwụkwọ ikike. Maka onye dị ka ya nke na-adịghị atụ egwu ikpughe ihe ọ bụla, ngwaọrụ ndekọ dị ka ahụ nwere ike inwe mmetụta na omume ya? Hinkel na-ekwu, na-agbakwunye na ọzụzụ onwe na ọzụzụ agụmakwụkwọ na-enye ihe ngwọta ga-adịte aka karịa ngwaọrụ ndị a ga-eji eme ugbu a. Echere m na ịkwesịrị ịkwadebe uche gị. ”
Ọ dị na: https://www.pinnacleresponse.com/body-worn-cameras-for-rail-transportation-and-logistics
ONYE NA-ADTKWETA, S., APRIL 22, 2019. MAGAZINE NA-AKWRS N NRF. [N'ịntanetị]
Ọ dị na: https://stores.org/2019/04/22/captured-on-camera/
Europe, LM, July 5, 2017. LPM. [Na ntanetị]
Ọ dị na: https://losspreventionmedia.com/body-worn-camera-policy-retailers/
Johnson, C., nd Ntụgharị maka azụmahịa. [Na ntanetị]
Ọ dị na: https://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Clo-Con/Communication-in-Organizations.html
Rebecca Webb, Sep 26, 2017. Mgbapụ doro anya. [Na ntanetị]
Ọ dị na: https://www.clearrisk.com/risk-management-blog/7-risks-wholesalers-must-prepare-for
Nchebe, R., nd nke Rewire Security. [Na ntanetị]
Ọ dị na: https://www.rewiresecurity.co.uk/blog/the-true-cost-of-vehicle-tracking
Nzuzo 6623 2 Echiche Taa